Homeसमाचार१० महिने शिशु सहित आमाबाबुले गरे देह’त्याग (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 8, 2021 admin समाचार 7756
एकै परिवारका तीन जनाले दे’ह त्या’ग गर्नु कुनै चानचुने कुरा हैन । त्यो पनि नवजात शिशुको साथमा । दे’ह त्याग गरेकी एक जना आमाले आफ्नै १० महिने शिशुलाई पहिला रुखको हाँh’गोमा झुj’ण्ड्याaएर त्यसै हाँ’hगोमा उनी आफु पनि झुj’ण्डिjएको अवस्थामा गाउँलेहरुले फेला पारेका छन् । आमा र उक्त शिशु झु j’ण्डीaएको उक्त ठाउँदेखि केही परको भिरबाट बाबुले पनि हा’ म ‘फा’लेर प्रा’ण त्या’गेका छन् ।
यो प्युठान जिल्लाको नौब’हीनीगाउँपालिका वडा नं. २ को लिगा भन्ने ठाउँमा घ’टेको निकै नै दुःखद घ’टना हो । प्यूठानको लिगामा भएको यो घ’टनालाई गाउँलेहरुले देह त्याग नभई ह’ ‘त्या भएको हुने सक्ने शं’का व्यक्त गरेका छन् । यो घटनामा मृ’त्यु भएकाको आफन्तहरुको भनाई अनुसार घ’टना हुने दिनमा सबै कुरा सामान्य नै भएको बताएका छन् । दे’ह त्या’ग गर्ने महिलाले बिहान मात्रै आफ्नै घरमा आएका पाहुनालाई राम्रैसंग खाना खु’वाएर पठाएको बताएका छन् ।
बिहानको समय बितेपछि शनिबारको दिन बेलुका झ’ण्डै साढे पाँच बजेको समयमा ए’क्कासी ती मृ’तक महिलाले १० महिने नवजात शिशुलाई पहिला मा’रे’र त्यसपछि आफुले दे’ह त्याग गरेको बताईएको छ । त्यतिञ्जेल सम्ममा श्रीमानले सबैलाई अ’त्तालिंदै आफ्नो घरमा भएको खबरको बोरमा जानकारी गराएको पनि तीनै बिहान खाना खाएर गएका व्यक्तिले बताएका छन् । सो कुरा सुनेर ती खाना खाएका व्यक्ति पनि अच’म्मित भएको कुरा बताए । – इताजा खबरबाट
कृष्ण ओली र रुपाले छोरासँग बनाएका चर्चित टिकटक भिडियोहरु (हेर्नुस् भिडियो )
August 11, 2021 admin समाचार 5429
कृस्न ओलि जस्ले लग`भक अढाई बर्ष अघि ११००० भोल्टको क`रेन्टको सिकार भएका थिए ।उनले आफ्ना दुबै हात र एउटा खुट्टा समेत गुमाए`का थिए । हुने हार दैव नटार भने`जस्तै नै थियो त्यो परिदृश्य ।सम्झिदा पनि
सुनको मूल्य तोलामा ९ सयले बढ्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ?
April 9, 2021 admin समाचार 5484
स्थानीय बजा’रमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । पछिल्लो केही दिन यता लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य शुक्र’बार पनि तोलामा ९ सय रुपैंयाले बढेर प्रतितोला ८९ हजार ९ सय मा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसाय महा’संघले जनाएको
March 19, 2021 admin समाचार 6098
शनिवारदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसा’रण भइरहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ आ’लोचित बनेको छ । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ को पहिलो एपिसियोड नै आलो’चना नै आ’लोचनाले भरिएको छ । हजारौँले दिएको डि’जिटल अडिसनबाट छनोट भएका ३५ टिमको फिजिकल अडिसन शनिवार प्र’सारण